प्रधानमन्त्री ओलीको जुत्ताले नेपालको झण्डालाई छोएको भन्दै तात्यो सामाजिक सन्जाल, कस्ले के भने? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रधानमन्त्री ओलीको जुत्ताले नेपालको झण्डालाई छोएको भन्दै तात्यो सामाजिक सन्जाल, कस्ले के भने? हेर्नुस्
admin October 13, 2020 October 13, 2020 समाचार, समाज	0
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको एक फोटो पोजले बिबाद निम्त्याएको छ । तस्वीर कैले को हो भन्ने नखुले पनि प्रधानमन्त्री को जुत्ताले नेपालको झण्डालाई छोएको भन्दै सामाजिक सन्जाल तातेको हो । तस्वीर मा जुत्ताले झण्डा लाई छोएको भने देखिदैन । झन्डा तर्फ जुत्ता भने सोझिएको छ ।
ट्विटर मा रोशन शिवाकोटी लेख्छन, तपाइले बिश्व मै कुनै बहालवाला प्रधानमन्त्रीको फोटोको यस्तो प्रकारको पोज देख्नुभएको छ रु यो फोटो हेरेपछि तपाइलाइ कस्तो भाब उत्पन्न भयो ?
यस्तै राजनीतिज्ञ मुमा राम खनाल लेख्छन्: यस्तो फोटो मैले भु’त को हिन्दी सिनेमामा पुरानो राजाको रूपमा देखेको थिएं, जसलाई उनका विरोधिले ष;ड्य’न्त्र पुर्वक ह’त्या गरेर भु’त बन्छ्न।
विनोद गोर्खाली स्टाटसमा प्रतिक्रिया दिदै लेख्छन्, कुनै पनि चलचित्रकी नायिकाले कथा र निर्देशकको निर्देशन गरे अनुसार अं’ग प्रदर्शन गरे जस्तो ! यिनको पनि पटकथा, कथा र निर्देशकले भने अनुसार गरेका होलान् नि ! दर्शकलाई मनोरंजन, निर्माताको लगानि असुली।।।।
सागर नामका ट्विटर प्रयोग कर्ता लेख्छन् ( देशको प्रधानमन्त्री कुर्सीमा बसिरहेको हुनुहुन्छ,प्रधानमन्त्रीको जस्तै तेजस्वी अनुहार लिएर, कन्फिडेन्स लिएर।।। अरु खासै केही पनि छैन ।
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेकालाई बाहिर पठाउने निर्णय नभएकाे जानकारी